सुलसुले २०७७ फागुन २ गते १५:१९ मा प्रकाशित
मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि नयाँ राज्य पुनःसंरचनाअन्तर्गत बनेका प्रदेश र यसका संरचना विस्तारै स्थापित हुँदै गएका छन् । प्रदेशका संरचना स्थापना भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण गर्ने काम गरेको छ । यससँगै प्रदेश सरकारले जनतालाई विकाससँग जोड्ने गरी विकासका सानाठूला आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको राप्ती उपत्यका क्षेत्रमा पहिलो पटक स्थापना दिवसको मूल समारोह आयोजना गर्दैछ । यसै विषयमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलसँग राष्ट्रिय समाचार समिति(रासस) का लागि भरत केसी र नीरा गौतमले गरेको अन्तर्वार्ताको अंश :
यस्तै सङ्घीय विकास आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रियामा पनि तीव्रता दिएका छौँ । अन्य क्षेत्रको तुलनामा सङ्घीय बजेटको कार्यान्वयनमा पनि हामी थप प्रगति हासिल गर्न सक्ने भएका छौं । विगतको तुलनामा लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत सङ्घीय बजेट कार्यक्रमको कार्यान्वयन क्षमता बढेको छ । यससँगै सात वटा प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहको पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता चाहिँ सबैभन्दा माथि छ । समयमै बजेट निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने काममका लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तह अग्रणी छन् । यस हिसाबले भन्दा तीनवटै तहका सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वगन गर्ने क्रममा लुम्बिनी प्रदेशमा अनुकूल वातावरण तयार भएको मलाई लाग्छ । यस तीन वर्षको उपस्थितिले लुम्बिनी प्रदेशको विकासनिर्माणका काममा अनुकूल आधार तयार भएको भन्ने मलाई लाग्छ ।
हामीले युवालाई स्वयंसेवकका रुपमा, सहजकर्ताका रुपमा परिचालन गर्दा परम्परागत कर्मचारीतन्त्रभन्दा नयाँ युवा विकासको मोटीभेटरका रुपमा उभिन सक्दारहेछन् भन्ने कुराको प्रभाव चाहिँ दिएको छ भन्ने लाग्छ । यो कार्यक्रम अलि मौलिक हो र रकम न्यून छ, प्रभाव भने धेरै सकारात्मक छ । हुन त समष्टिगतरुपमा हेर्दा १०९ वटा पालिकामा सञ्चालन भएका कार्यक्रमका हिसाबले झण्डै रु. एक अर्ब कार्यक्रमअन्तर्गत खर्च भइराखेका छन् । एउटा पालिकाका लागि रु. ७०/८० लाख ठूलो रकम त होइन र तर त्यो लक्षित समुदायमा केन्द्रित भएको देख्दा त्यो कार्यक्रमको प्रभाव सकारात्मक देखिन्छ ।
त्यसो होइन, बरु लक्षित समुदाय केन्द्रित भएर ठोस ढङ्गले काम भएका छन् । सम्पादन गर्ने प्रक्रिया भने पहिलेको तुलनामा तीव्र भएको छ । कोहलपुरमा चिडिमारको एकीकृत बस्ती निर्माण गरेका छौँ । एउटा सिङ्गो बस्तीलाई जनता आवाससँग जोडेर ल्याएका छौँ । अर्को, धेरै समय राज्यले उपेक्षा गरेको सुस्तामा झण्डै २५० घर एकैचोटि बनाउने प्रक्रिया थालनी गरेका छौँ, त्यो हिसाबले हेर्दा पहिलेको तुलनामा गति स्वाभाविकरुपमा बढी देख्नुहुनेछ ।